Iindaba -Iodolo enkulu yediphu eshushu yentsimbi yentsimbi
I-odolo enkulu yediphu eshushu e-stacking rack
Kwiveki ephelileyo, umzi-mveliso wethu wakha ubudlelwane beshishini lwexesha elide kunye nenkampani yelinye ilizwe kwiprojekthi yokufaka ingqokelela. Kwaye saseka isebe elitsha kule projekthi.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuthenga izinto zokwenza imveliso. Ngomvulo, isebe elinxulumene noko lidibene nomthengisi wezinto kwaye lasayina isivumelwano sentsebenziswano, esimalunga nokusinika izixhobo zentsimbi ezikumgangatho ophezulu ze-Q235.
Inyathelo lesibini kukuthenga umatshini omtsha. Ukuvelisa iimveliso ezichanekileyo eziphezulu, umzi-mveliso wethu ugqibe ekubeni uthenge umatshini ohambelana noko, kwaye unokuphucula ukusebenza kwemveliso.
Inqaku lesithathu ngabasebenzi. Ngaphandle kwabasebenzi abaqolileyo nabanamava abakhe bayenza le projekthi ngaphambili, sisebenzise imali eyongezelelekileyo ekufumaneni ezinye iintsimbi ezinesakhono, ukuqinisekisa ukurhangqwa kohanjiso ngaphandle kwamagingxi-gingxi, ukongeza, ukuqinisekisa ezinye iiodolo ezivelisa zize zinikezele ngempumelelo.
Inqaku elandulelayo, salungiselela abantu ababini ukuba babe noxanduva lomgangatho wale projekthi: inkqubo ye-welding, ukuvavanya umgangatho wokuvavanywa, kunye nokulawula yonke inkqubo yokuqinisekisa ukuba sinokunikezela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi.
Ngokwenyani, kule minyaka idlulileyo, ukufumba kwezinto kuye kwasetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokugcina izinto ezahlukeneyo. Asinako kuphela ukubonelela ngeentsimbi zokufaka, kodwa sikwenza nomgubo wokufaka ingqele. Ubungakanani leposi, amanqanaba, ukulayisha umthamo ungenziwa ngemfuneko. Yimveliso evuthiweyo eneenzuzo ezininzi, umzekelo, ayihlali kwindawo enkulu kakhulu kwaye iyabhetyebhetye ukusetyenziswa, kwaye inqanaba lokusetyenziswa kwendlu yokugcina liphuculwe ngokupheleleyo. Isetyenziswa ngokubanzi kugcino lwelaphu, ukugcinwa kwetayara, ukugcinwa okubandayo, kunye nezinye iindawo. Ngaphandle koko, sinokuvelisa iindawo ezinokugoqwa ngokuhambelana neemfuno zokugcina zabathengi.
ILiyuan, njengefektri ethembekileyo, iya kubaphatha bonke abathengi kangangoko sinako, kwaye senze yonke iodolo ngononophelo. Okubaluleke ngakumbi, sinesebe elizinikeleyo emva kokuthengisa. ILiyuan ifanelwe kukuthenjwa nguwe.